Salaamanews » South Africa oo ku hanjabtay in tallaabo adag ay ka qaadeyso qaadka
Home » Dhaqaalaha, Warar South Africa oo ku hanjabtay in tallaabo adag ay ka qaadeyso qaadka Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 28th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Ganacsatada Soomaaliyeed oo amar adag lagu soo rogay (Sawirro)Ganacsiga Buula-burte oo hakad galay kadib amar ay soo rogtay Al-shabaabMuran xoogani oo ka dhashay kallumeyste lagu dilay KismaayoSoomaalida oo tamarta qorraxda laga dhaliyo uga hortagaysa nabaad-guurkaDhoofinta xoolaha Soomaaliya oo waafaqaya heerka amniga ee caalamka
(Salaamanews)-Dowladda South Africa oo horey u mamnuucday cunista iyo ka ganacsiga qaadka ama jaadka ayaa soo rogtay amar aan ka noqosho laheyn kaa soo ku dhici doono cidii lagu helo iyadoo iibineysa ama cuneysa qaadka nuucyadiisa.
Warbixin ka soo baxday taliska baleyska wadanka koofur Africa ayaa lagu sheegay inaan la ogolaan doonin waqtigan wixii ka dambeeya iibinta iyo cunista ama ganacsiga qaadka, oo ay aad u isticmaalaan dadka Soomaalida ee jooga dalkani koofurta Africa.
CIidmada baleyska oo aad u baacsada kooxaha iibiya qaadka ayaa marar badan waxay xireen dad cunaya qaadka, waxaana labadii todobaad ee la soo dhaafay talefashinka dowladdu uu baahinayay wacyi galin loo jeedinayo dadka qaadka iibiya iyo kuwa cuna.
Afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay inay ka cudur daaranayaan inaanu wali qodob sharci ah noqon ka ganacsiga iyo cunista qaadka wuxuuna sheegay in baarlamaanka loo gudbin doono arrintan si ay dastuurka wadanka ugu biiriyaam.
“Qaadka waanu ognahay inaanu sharci aheyn mamnuuciisa, waayo wali laguma soo darin dastuurka wadanka, laakiin baarlamaanka ayaa loo gudbin doonaa, qaadku wuxuu la mid yahay muqaadaraadka la mamnuucay sida xashiiska” ayuu yiri afhayeenka u hadlay koofur Africa.
Dadka Soomaalida ayaa ka soo horjeeda in la joojiyo iibinta iyo cunista qaadka, iyagoo u sababeynaya in nolashoodu ay ku tiidhsantahay, waxaana la ogeyn sida ay isku waafaqi doonaan Soomaalida iyo baliiska dalka South Africa.
Tags: ganacsiga, warar « Qoraalkii HoreSoo dhaweynta wafdiga dowladda ee Kismaayo ayaa muujisay inaanu khilaaf jirin (xog)	Qoraalka Xiga »Daawo:xulka heesta maanta	Halkan Hoose ku Jawaab